इन्स्टाग्राममा प्रयोग गर्नका लागि दुई नयाँ रंग फिल्टरहरू ग्याजेट समाचार
इन्स्टाग्राम युवा व्यक्तिहरू (मुख्यतया) द्वारा चित्रमा गुणस्तर मनपराउने र सबैभन्दा बढि प्रयोग गरिएको मोबाइल अनुप्रयोग मध्ये एक मानिन्छ विशेषता रंग जुन तिनीहरू देखाउन सकिन्छ आफ्नो फोटोहरु को हरेक।
यो लगभग पूर्ण नियम देखिन्छ कि इंस्टाग्रामले यसको प्रत्येक अपडेटको साथ प्रयोग गर्दछ, किनभने जब तिनीहरू मध्ये केही लिन्छन्, हामी जहिले पनि त्यहाँ फेला पार्दछौं कि त्यहाँ नयाँ रंग फिल्टर एकीकृत गरिएको छ। आईओएस र एन्ड्रोइडको साथ मोबाइल उपकरणहरूको लागि भर्खरको अद्यावधिकमा, दुई नयाँ फिल्टरहरू समावेश गरिएको छ, जुन सैद्धान्तिक रूपमा लिइएको तस्बिरहरूको केहि पक्षहरू सुधार गर्ने सम्भावना छ।
1 इन्स्टाग्राममा समावेश गरिएका नयाँ फिल्टरहरू के हुन्?
2 यी नयाँ इन्स्टाग्राम फिल्टरहरू कहाँ फेला परेका छन्?
इन्स्टाग्राममा समावेश गरिएका नयाँ फिल्टरहरू के हुन्?
सर्वप्रथम, हामीले सल्लाहको रूपमा उल्लेख गर्नुपर्दछ कि यदि तपाईं माथि हामीले उल्लेख गरेका कुनै पनि मोबाइल उपकरणहरूमा इन्स्टाग्राम छ भने, तपाईंले प्रयास गर्नु पर्छ। पछिल्लो संस्करणमा यसलाई अपडेट गर्नुहोस् अन्यथा, तपाईंसँग «को फिल्टरको प्रशंसा गर्ने संभावना छैन।ध्यान दिनुहोस्»र लाई«रंगर, यी दुई इन्टरफेस भित्र अवस्थित विकल्पहरूको विस्तृत श्रृंखला को नयाँ सदस्य भइरहेको छ।
लिइएको छविहरूमा यी दुई फिल्टरहरू लागू गर्न विभिन्न तरिकाहरू छन्, जुन मुख्य रूपमा यसको प्रत्येक प्रयोगकर्ताको सीप र रचनात्मकतामा निर्भर गर्दछ। अब, यी फिल्टरहरूसँग तपाईंले काम गर्नुपर्दछ, यो केहि चीज हुन सक्छ राम्रोसँग ड्राइभ नगर्नेहरूको लागि भ्रामक यस इन्स्टाग्राम अनुप्रयोगमा, यो हाम्रो वर्तमान लेखको लागि कारण हो, जुन हामी यी फिल्टरहरू अवस्थित भएको ठाउँमा पुग्नको लागि "चरण-देखि" उल्लेख गर्ने प्रयास गर्नेछौं र पाठ्यक्रमको कसैलाई पनि प्रयोग गर्नका लागि। हामी लिनको लागि फोटोग्राफहरू।
यी नयाँ इन्स्टाग्राम फिल्टरहरू कहाँ फेला परेका छन्?
ती जो अनुभवी प्रयोगकर्ताहरू तलका सल्लाहहरू लाई आधारभूत र बेकारको रूपमा लिन सक्दछन्, यद्यपि हामीले विचार गर्नुपर्दछ कि ठूलो संख्यामा व्यक्तिले यस प्रकारको आवश्यक छ इन्स्टाग्राममा प्रत्येक प्रकार्यका साथ कसरी काम गर्ने जान्नको लागि विवरणहरू। हामीले उल्लेख गरेका दुई नयाँ फिल्टरहरूको सम्बन्धमा, तपाईंले तस्वीर लिनु भएपछि तिनीहरूलाई फेला पार्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब यो हो कि ती छविहरूमा जुन तपाईं पहिले नै लिइसक्नु भएको छ, प्रकार्यहरू देखा पर्न सक्दैनन्।
त्यसकारण, हामी सिफारिश गर्दछौं कि तपाईं क्यामेरा आकारको आइकन (क्लिक गर्नुहोस् तलको पट्टीको बीचमा); त्यो नै क्षणमा, मोबाइल उपकरणको क्यामेरा सक्रिय हुनेछ, तपाईं केहि क्याप्चर गर्न को लागी। अवश्य पनि, तपाइँ ग्यालरीको फोटोग्राफर वा "रोल क्यामेरा" सम्मिलित गर्न सक्नुहुनेछ। जब तपाईंसँग तिनीहरू मध्ये कुनै दृश्यमा हुनुहुन्छ, र color्ग फिल्टर र लागू गर्न छविहरूको केही विकल्पहरू तल देखा पर्नेछन्। नयाँ प्रकार्यहरू फेला पार्दैन न त बरु, जब हामी टी हुन्छौंशीर्षमा "स्प्यानर" को आकारमा आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्।
एक पटक तपाईले यो आइकन चयन गर्नुभयो, तपाईले देख्नुहुनेछ कि अन्य प्रकारको आइकनहरू तल देखा पर्दछन् जुन हाम्रो फोटोग्राफहरूको साथ कार्य गर्न वास्तवमा आउँदछन्। ती मध्ये, तपाईंले गर्नु पर्छ "डिम" र "र Color" भन्ने व्यक्तिहरू खोज्नुहोस्; पहिलोले छविमा सानो फेड उत्पादन गर्दछ, जुन तपाईं सजिलैसँग स्लाइडर विकल्पको साथ भिन्न हुन सक्नुहुनेछ जुन त्यस समयमा प्रदर्शन हुनेछ। अन्य प्रकार्य (रंग) मा, यसलाई चयन गर्दा, केही रंगहरू तल्लो भागमा देखा पर्नेछ, डबल ट्यापको साथ तिनीहरू मध्ये कुनै छनौट गर्नुहोस् ताकि स्लाइडर बटन देखा पर्दछ। कुनै पनि केसमा, यो "स्लाइडर बटन" चाहेको प्रभावको अधिक वा कम गहनताको लागि प्रयोग हुनुपर्दछ। जब तपाईं प्रशोधन समाप्त गर्नुहुन्छ, तपाईं यस फोटो बचत गर्न सक्नुहुनेछ र पछि आफ्नो साथीहरूसँग इन्स्टाग्राममा साझेदारी गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » टेलिफोनी » मोबाईलहरू » इन्स्टाग्राममा प्रयोग गर्नका लागि दुई नयाँ रंग फिल्टरहरू
गुगल क्रोमको नयाँ ट्याबमा थम्बनेलहरू हराइरहेको छ